Fadisitti gootonni Oromoo warana liyyu hayl wayyaanen ummata Oromoo irratti | Kichuu
Fadisitti gootonni Oromoo warana liyyu hayl wayyaanen ummata Oromoo irratti bobbaaste 14 ajjeesudhaan injifannoo cululuqaa galmeessaniiru.
Fadisitti gootonni Oromoo warana liyyu hayl wayyaanen ummata Oromoo irratti bobbaaste 14 ajjeesudhaan injifannoo cululuqaa galmeessaniiru. Ummanni, qeerron, poolisiin, milishaan Oromoo gamtaan dhiichisanii gammachuu ibsatan.
Injifannoon itti fufa.
Addi Bilisummaa Uummata Tigiraay Guyyuun Akkaataa Oromiyaa Waraanaan Bulchuu Danda’anirratti Marii fi Murtee Dabarsaa Jiru.
Guyyaa kaleessaa waajjira Ministeera Muummichaa keessatti, humnoonni nageenyaa Federaalaa, Pereezidaantonni Naannolee , Kantiibota Magaalota , koomishinaroonni poolisii Federaala fi ajajoonni Raayyaa Ittisaa Muummicha Ministeeraa Obbo Haayilamaariyaam Dassaalany waliin dhimma wayitaawaa biyyattii irratti marii akka geggeessan beekameera.
Akkaataa marii isaanii kana irraa hubachuu yaalametti,mariin kun dhimma nageenyaa fi tasgabbii biyyattii keesssaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta’u, haala biyyattiin nagaa fi tasgabbiin waggaa tokko guutuuf itti hoogganamuu dandeessu irratti karoori ba’uu isaa Ministirri Ittisaa fi Hogganaan Mana-maree Nageenyaa Biyyaalessaa Obbo Siiraaj Fargeessaa Geezexeeysitootaf ibssa kenaniiru Jechuun Dhaabbani Oduu Mootummaa Woyaanne Faanan gabaasera .
Karoorri bahe kun sadarkaa Federaalaa irraa hanga gandaatti hojiirra kan oolu ta’uun ibsameera.
Mootummaan Wayyaanee qabsoo Hawaasni Oromoo dhiigaa fi lafee isaa itti caccabsee asiin gahe of duubatti deebisuuf, akkasumas Tokkummaa Uummata Oromoo uumame diiguun Uummata Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalatti bulchuuf dhakaan isheen hin buqqisne, boolli isheen hin qotne hin jiru.
Kanumaan walqabatee mariin guyyaa kaleessaa waajjira Muummicha Ministeeraatti taa’ame kun irra jireessi isaa haala itti Oromiyaa waraanaan bulchan irratti kan xiyyeeffateef Kalatii biraattin Oromiyyaa keessat labsii mudamaa labsuuf caraaqa akka jiran hayyoon tokko tokko yaada isaani kenaa jiru .
Shira Jeneraaloonni Wayyaanee halkanii fi guyyaa nutti xaxaa jiran kana Nuti hawaasni Oromoo akka Uummataatti Tokkummaa keenya eeggannee qabsoo keenya tarsiimoon tarkaanfachiisuun dirqama hunda keenya yommuu ta’u, Hooggantoonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa shira kana fashaleessuu fi ofiifis shira itti xaxame kana irra ooluuf kutannoon qabsaa’uu akka qaban dhaamsa keenya dha !!!
Oromoon gaafa mammaaku “Yaa Marqaa si afuufuun si liqimsuufi ” jedha maarree shirri xaxame kun adda dureen kallattiin hooggantoota Naannoo Oromiyaa waan ilaallatuuf, of hin dagatiinaa jechuun dhaammanna !